काठमाडौंमा एक महिलामाथि सामूहिक बलात्कार
काठमाडौँ । काठमाडौँको तारकेश्वरमा एक महिला माथि सामुहिक बलात्कार भएको छ ।
३० वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले तारकेश्वर नगरपालिका-४ पुरानो गुहेश्वरी बस्ने ३९ वर्षीय रोम राज पुतुवार र ४९ वर्षीय लाले तामाङलाई प्रहरी पक्राउ गरेको छ ।
आइतबार साँझ महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुबाट खटिएको प्रहरीले नीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाले सहयाेग गर्ने भएपछि बढ्याे सामूहिक विवाहकाे लहर
कोशी गाउँपालिकाले अघि सारेको सामूहिक विवाह कार्यक्रमलाई स्थानीयले पछ्याउन थालेका छन् । उक्त गाउँपालिका अन्तर्गतका विपन्न परिवारका युवायुवतीले सामूहिक विवाहका लागि गाउँपालिकामा निवेदन दिन थालेपछि यो कार्यक्रमले लोकप्रियता हासिल गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
यो कार्यक्रमको जानकारी पाएपछि स्थानीय आठ जोडीले विवाहका लागि निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् । गाउँपालिकाले समयसीमा दिएर मङ्सिर ६ देखि ११ गतेसम्म गरीब तथा विपन्न परिवारका इच्छुक व्यक्ति तथा अभिभावकलाई नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको थियो ।
गाउँपालिकाको सूचनालाई सामाजिक सञ्जालहरूमा सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी तथा प्रस्तुतिपछि गाउँपालिका यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउन तत्पर नै रहिआएको छ ।
हालसम्म आठ जोडीले निवेदन दिइसकेकाले यसको जानकारी गराउने बित्तिकै अरु पनि थपिने र यो बढ्दै जाने गाउँपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसका लागि गाउँपालिकाले अभिभावकको मन्जुरीसहित हाडनाता नपरेको स्वघोषणा र कानुनी रूपमा विवाह गर्न उमेर पुगेको प्रमाण तथा नेपालको कानुनले विवाह गर्न अयोग्य नभएको भन्ने स्वघोषणासहित दर्ता प्रक्रिया पूरा गरी विवाह गराइने बताएको छ ।
लगनका बारेमा बिबाह गराउने अभिभावकको राय पनि लिइने भएको छ । विवाहको प्रमाणपत्र पनि पञ्जिकाधिकारीद्वारा उति नै बेला उपलब्ध गराइने छ ।
हाल विपन्न परिवारका विवाहका लागि गाउँपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कोशी गाउँपालिकाले विवाह गरिदिने, कपडा किन्न एक जोडीलाई २० हजार रुपैयाँ
सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाले नौलो आवेदन खुलाएको छ। कर्मचारी मागेको होला भन्ने अनुमान गर्नुभयो भने तपाईं गलत हुनुहुनेछ।
किनभने गाउँपालिकाले विवाह गर्न इच्छुकहरूको आवेदन खुलाएको हो। २० वर्ष पूरा भएकाहरूले आर्थिक अभावकै कारण विवाह गर्न पाएका छैनन् भने अब गाउँपालिका सहयोगी बन्ने भएको हो। तर यो सुविधा सबैले पाउने छैनन्।
कसले पाउँछन् त ?
गाउँपालिकाभित्रका विपन्न वर्गलाई यस्तो सुविधा दिन लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले जानकारी दिए।
‘विपन्न वर्गका लागि सामुहिक विवाह आयोजना गरिएको हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाभित्रका इच्छुक व्यक्ति वा अभिभावकले मंसिर १७ गतेभित्र नाम दर्ता गराउनुपर्छ।’
कहाँ पुगेर दर्ता गराउने नाम ?
अध्यक्ष अन्सारीका अनुसार इच्छुक वा उनका अभिभावकले घर नजिकको वडा कार्यालय वा गाउँपालिकाको सामाजिक विकास शाखामा नाम दर्ता गराउन सक्छन्।
गाउँपालिकाले विवाहको आयोजना मात्रै गरिदिएको होइन। खर्च पनि जुटाइदिन्छ। ‘गाउँपालिकाले विपन्न वर्गका लागि विवाहमा सहयोग गर्न १५ लाख रूपैयाँ बजेट नै विनियोजन गरेको छ ।
कोशी गाउँपालिकाभित्र मुश्लिम र हिन्दु धर्मावलम्बीको बसोबास छ।
गरिबीकै कारण विवाह गर्न अप्ठेरो परेको अनुभव गरेपछि गाउँपालिकाले नै बजेट विनियोजन गरेको अध्यक्ष अन्सारी बताउँछन्। ‘गरिबीकै कारण विवाह गर्न बाबुआमालाई गाह्रो परेको पनि छ,’ उनले भने, ‘जो आउँछ उसैलाई छोरी दिँदा बालविवाह हुने गरेको छ। उमेर नपुगी हुने विवाहलाई पनि अब निरूत्साहित गर्छौं।’
कोशी गाउँपालिकाभित्रका बस्तीमा उमेर नै नपुगी विवाह गर्नेको संख्या विगतमा धेरै भएको उनले जानकारी दिए। ‘बाल विवाह रोक्नका लागि पनि यो योजना प्रभावकारी हुनेछ,’ उनले भने।
गाउँपालिकाले विवाहका लागि दुलाहा-दुलही भने खोज्दैन। तर लत्ताकपडा र भोजका लागि भने सहयोग गरिदिन्छ।
‘विवाह गर्ने जोडीका लागि आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा र जन्तीका लागि भोजको व्यवस्था गाउँपालिकाले गरिदिने हो,’ उनले भने, ‘कपडा खरिदका लागि दुलाहा-दुलहीलाई दश/दश हजार रुपैयाँ दिन्छौं।’
यस्तो खर्च पाउन दुलाहा वा दुलहीमध्ये एक गाउँपालिकाभित्रकै हुनुपर्ने नियम बनाइएको उनले जानकारी दिए।
विवाहका लागि नाम दर्ता गराउँदा नागरिकताको फोटोकपी पनि पेस गर्नुपर्नेछ। ‘विवाह गर्ने केटा-केटीकै नागरिकताको फोटोकपी फारमसँगै पेश गरेको हुनुपर्छ,’ उनले भने।
यस्तो विवाहमा सहभागी हुनेहरूले तामझामका साथ धेरै संख्यामा जन्ती भने ल्याउन पाउने छैनन्।
‘दुलाहापट्टीले जम्मा ५० जना जन्ती ल्याउन सक्छन्,’ अध्यक्ष अन्सारीले भने।
गाउँपालिकाले विवाह गर्ने समय पनि तोकेको छ। ‘विवाहको धेरै लगन हुने महिना मंसिर र वैशाखमा सामुहिक विवाह गराइदिने हो,’ उनले भने। मंसिर पहिलो साता पहिलो चरणमा विवाह गर्ने कार्यक्रम राखे पनि कसैले आवेदन दिएनन्।
‘हाम्रोतिर राति विवाह गर्ने चलन छ। अहिले जाडो भएर पनि विवाह कम भएको हुनसक्छ। वैशाखमा विवाह गर्नेहरू आउलान्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै जोडी विवाहका लागि आवेदन दिन आएका छैनन्।